अझै किन मौन छन् ओली ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ पत्रपत्रिका ∕ अझै किन मौन छन् ओली ?
दीप संञ्चार मंसीर ८, २०७८ गते ५:५९ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुख्य शक्ति नै आमकार्यकर्ता र प्रतिनिधि हुने भएकाले १०आंै महाधिवेशनमा उहाँहरूकै इच्छाअनुसार आफू अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले महाधिवेशनमा आफू केमा उठ्ने भन्ने कुराको निक्र्योल आमकार्यकर्ता र प्रतिनिधिले गर्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा आफू अहिले मौन रहेको स्पष्ट पारे ।
एमाले प्रचार विभागले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग गरेको अन्तत्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा हुने हरेक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आपूmले सम्मान गर्ने बताए ।
ओलीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई उसको इच्छाविपरीत सहमतिका नाममा बस्न आफुले कुनै दबाब नदिने स्पष्ट पारे । आपूmविरुद्ध कोही उम्मेदवार हुन्छ भने बस्नका लागि दबाब पनि नदिने भन्दै उनले भने, ‘मैले उठ्ने निधो गरें भने मलाई छोड्न नि पाउँछ, चुनौती दिन पनि पाइन्छ । कसैले चुनौती दिएमा स्वागत गर्छु । लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले आफूले सहमतिका लागि आग्रह गर्दा दबाब दिएको सन्देश जान सक्ने भएकाले नेतृत्व चयनको जुनसुकै प्रक्रियालाई पनि स्वीकार गर्ने स्पष्ट पारे । कार्यकर्ता वा प्रतिनिधिको इच्छा बेगर आफुले कुनै कदम नचाल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
उपाध्यक्ष डा.भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । ओली निकटका नेताहरूले आगामी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउँदै पार्टीमा ओलीको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘मैले उठ्ने, नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । जुनसुकै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै प्रतिनिधि स्वतन्त्र छन् ।’
अध्यक्षमा रावलको उम्मेदवारीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन । मप्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया र स्नेह देखाउनुभएको छ । बढी खट्नुहुन्छ थकाइ लाग्ने हो कि भनेर त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।’
ओलीले अगाडि भने, ‘उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन । सुझाव दिनुभएको छ । उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु । यो एक खालका मान्छेहरूले मन पराउने सुझाव पनि छ । यसमा मैले सोच्ने कुरा छुट्टै छ, समय आएपछि निर्णय गर्छु ।’
त्यस्तै, उनले माधवकुमार नेपालसहितको नेताहरू बाहिरिँदा पार्टीमा विवाद अन्त्य भएको दाबी गरे । आपूmहरू प्रतिपक्षमा पुगेर पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अवसर मिलेको उनले बताए । ओलीले पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पार्टीगत रूपमा निम्ता गर्न नमिलेकाले निम्ता नगरिएको स्पष्ट पारे ।
ओलीले भने, ‘माधवकुमार नेपाललाई पार्टीका रूपमा निम्ता गर्न मिलेन । ’अबगकभ, हामीले उहाँलाई २५ साउनमा अनुशासनहीन क्रियाकलाप, लोकतन्त्रमा नसुहाउने पार्टी फुटाउने काम गरेको र त्यो देशको अहितमा रहेकाले कारबाही गरेर निष्कासन गरेका थियौं ।’
सो कुराको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा गराइएको अवस्थामा २ भदौमा अवैध रूपमा पार्टी गठन गरेकाले नेपाललाई बोलाउन जरुरी नभएको उनले बताए । उनले माधव नेपालको कुनै पार्टी नभएको पनि जिकिर गरे ।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा नेपालका सवारी साधनले बोक्न सक्ने जति मानिस सहभागी हुने दाबी गरे । महाधिवेशनमा १०÷२० लाख जनसहभागिता जुटाउन सकिने भए पनि सवारीसाधनको क्षमताले भ्याएसम्म मात्र मानिस चितवनमा उपस्थित हुने ठट्यौली पारामा उनले बताए ।
‘नेपालका सवारीसाधनले बोक्न भ्याउने जति जनसमुदाय सहभागी हुनेछन्, ठुला सवारीसाधन, लामो दूरीका सवारी साधनले बोक्न सक्नेसम्मको मानिस महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छन्’ ओलीले भने, ‘कति छ नेपालका बसहरूको क्यापासिटी, एकपटकमा उनीहरुले कति बोक्न सक्छन् त्यसअनुसार सहभागिता हुन्छ । न्यूनतम् ५ लाख उपस्थित हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।
कोभिडको समय भएकाले धेरै ठुलो संख्यामा विदेशी प्रतिनिधि भने महाधिवेशनमा सहभागी नहुने उनले बताए । देश बनाउने योजना तथा कार्यक्रम विधान महाधिवेशनबाट पारित भइसकेका कारण ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि कस्तो नेतृत्वको टिम निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा बन्दसत्र केन्द्रित रहने उनले बताए । १०औं महाधिवेशनले मुख्य रूपमा पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेमा विभिन्न पार्टी तथा समूहबाट आएकाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले सबै जना बुझ्ने हुनुहुन्छ एकताको सन्देश दिन आवश्यकताअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएर भए पनि सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित गर्न सबै जना तयार हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नु पनि एक विधि भएको बताउँदै उनले सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्रअनुसार प्रतिपस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को महाधिवेशन झापामा गरेर देखाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चुनौती दिए । प्रचण्डले चितवनमा महाधिवेशन गरेर एमालेले आफूलाई घेराबन्दी गरेको गुनासो गरेका बेला ओलीले कोही चुनाव लडेको छ भन्दैमा महाधिवेशन गर्नै नहुने कुरा स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे ।
‘महाधिवेशन कहाँ गर्ने समस्या होइन । रोल्पातिर गरौं चुनाव लड्नुभएको छ । सिरहा गरौं उहाँ लडेको छ । काठमाडौंमै गरौं उहाँ चुनाव लडेको छ । चितवनमा गर्दा पनि उहाँ लडेको छ,’ ओलीले भने, ‘हामीले त आफ्नो पार्टीको चुनाव गरिरहेका हौं । बरु म उहाँलाई झापा आउन आह्वान गर्छु । झापा आएर माओवादी अधिवेशन गर्नुस् ।’
कोही चुनाव कहीँबाट लडेको छ भन्दैमा महाधिवेशन गर्नै नहुने भन्ने मान्न नसकिने जिकिर ओलीले गरे ।
कार्यक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले महाधिवशेनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै उद्घाटन समारोहमा ५ लाख बढीको जनप्रदर्शन हुने बताए ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनमा मंसिर १०, ११ र १२ गते चितवनमा हुँदै छ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानको व्यवस्थाअनुसार १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात जना सचिव गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।